Abbootiin Irree Dabaree Hogganoota TPLF Tohataman Irraa Barachuu Qaban. | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ January 9, 2021 January 9, 2021
Tooyannoo jala ooflamuun Hoggantoota fi qondaaltota TPLF gameeyyii marsaalee hawaasummaa irratti oduu ijoo tahe.
Hogganaa kutaa duulaa waraanaa Itoophiyaa Birgaader jeneraal Tasfaayeee Ayyaalew ibsa amma dura kennan keessatti hoggantoonni TPLF ol’aanoo 4 ajjeefamuu fi kanneen biraa 9 booji’amuu dubbatanii turan.
Hundeessaa fi hogganaan Adda Bilisabaasa Ummata Tigraay obbo Sibahaat Naggaa warreen tooyannoo jala oolfamanii fi suuran isaanii marsaalee hawaasummaa irra naannawaa jiru keessatti argamu. Suuran kunis isaanii Xiyyaara Adii irraa buufamanii fi humnoota nageenyan marfamanii dhaabbatan kan mul’isu.
Obbo Sibahaat Naggaa, oggeessa fayyaa Hospitaala Xoor Hayloochi kan turanii fi amma soorama bayan haadha warra obbo Sibahaat Leetenaal Koloneel Tsa’aduu Riich, Koloneel Kinfee Taaddasaa, Koloneel Yamaanee Kaahisaay namni gaafatamni isaa ammaaf hin baramin Asaggid G/Kiristoos je’amu, Komaandar Barihee Girmaa fi Amdamaariyaam Tasammaa namoota amma tooyannoo jala oolfamni.
Warra qabaman kanneen keessatti yakka RIB ganuutin warreen mootummaan himate ni argamu.
Hogganaa Borodkaastii Itiyoophiyaa kan turan Obbo Zaraay Asgadoom warreen ajjeefaman keessatti argamu.
Qondaalli Waraana Itiyoophiyhaa Janaraal Tesfaayee Ayyaaleew dabaluunis, haatii warraa Meejar Jeneraal Haayaloom Arayaa dheenya kana Ameerikaa irraa Tigiraay dhaqanii turan Aadde Algaanesh Mallas ”oppireeshinii aanga’oota TPLF qabuuf geggeeffamaa ture jalaa osoo dheessan boolla lixuun du’anii je’an.
Duulli hoggantoota fi miseensota TPLF adamsuu kun erga lolli xumurame je’ee mootummaan labseen booda. Garuu akkaataa ajjeechaan hoggantoota TPLF irratti fudhatame je’amu kun shakkii uumee jira. Namoonni hedduun TPLF badii ni qaba garuu namoota seeran adabuu dha malee dirree waraanatti fixuun sirrii miti, seera waraanaa idil addunyaa kan cabsu jechuun yoo falman gariin ammoo TPLF hojii isaa dhandhamaa jira itti muddi jechuun miira gammachuu ibsu.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii Tigraay keessatti yakki waraanaa raaw’atamuu mala waan taheef qaamni walabaa nannichatti bobba’ee qorannoo akka geggeessu yaada dhiheessun isaa ni yaadatama.